लगानी बोर्डद्वारा ३ ओटा ठूला परियोजनाका लागि ३८ अर्बको विदेशी लगानी स्वीकृत
कात्तिक २६, काठमाडौं । लगानी बोर्डले तीन ठूला जलविद्युत् परियोजनाका लागि रू. ३८ अर्ब बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्ड अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको बोर्डको ४५ औं बैठकले तीन ओटा ठूला परियोजनाका लागि रू. ३८ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा कार्यान्वयन हुने ७७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि रू. १७ अर्ब ६२ करोड ४० लाख बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डका प्रवक्ता धर्मन्द्रकुमार मिश्रले जनाकारी दिए ।
उनका अनुसार ५७ मेगाावाटको हिमचुली दोर्दी जलविद्युत् परियोजनाका लागि रू.१० अर्ब ६१ करोड ९१ लाख र ६५ मेगावाटको दुधखोला जलविद्युत् परियोजनाका लागि रू.१० अर्ब ४३ करोड ६० लाख लगानी स्वीकृत भएको हो ।
बोर्डको अध्यक्ष ओलीले बैठकमा कोभिड–१९ ले नयाँ शिक्षा दिएको बताउँदै परियोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको विलम्बलाई हटाउन नयाँ प्रविधिको आवश्यकता भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले कोरोनाका कारण बोर्डको बैठक नियमित बस्न असहज भए पनि आगामी दिनमा नियमित हुने जानकारी दिनुभयो ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डमार्फत प्रवर्द्धन र सहजीकरण भएका परियोजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्था र बोर्डका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । भट्ट सीईओ नियुक्ती भएपछि बोर्डको पहिलो बैठक बसेको हो । रासस
२ सातामै रू. १४ अर्ब कर्जा प्रवाह[२०७७ मंसिर, १७]
सुस्तायो ठूला आयोजनाको गति[२०७७ मंसिर, १७]
पूर्वाधार ठेक्काको म्याद थपमा पुनः किचलो[२०७७ मंसिर, १७]
शेयरबजार उच्च : स्थायित्वसहितको बजार विस्तार आवश्यक[२०७७ मंसिर, १७]
कृषिबीमासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी : कुल व्यवसायमा ५% कृषिबीमा अनिवार्य[२०७७ मंसिर, १७]